Augustine Mahiga Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya oo codsi xasaasi ah u jeediyey Madaxweyne Xasan iyo Hay,ado caalami ah. - iftineducation.com
iftineducation.com – Augustine Mahiga Wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa ka hadlay dadka Soomaaliyeed ee dib ugu soo laabanayo dalka Soomaaliya.
Mr Mahiga ayaa sheegay in dadkii ugu badnaa oo Soomaali ah kana soo laabta dalalka Jaarka la ah Soomaliya iyo qaaradaha adduunka ay kusoo labaanayaan dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho,taasina ay ugu wacan tahay amaanka dalka.
Isaga oo ka hadlay dadka faraha badan ee soo laabanaya ayuu sheegay in ay kor usii dhaafayaan dadka soo laabtay ku dhawaaq 9 kun oo ruux,isagoo sheegay in dowlada iyo hayadaha caalamka ay iska kaashadaan sidii dadkii loo siin lahaa dhamaan adeegyada ay u baahan yihiin oo ay ugu horeyso shaqaaleysiinta dadkaasi.
Wuxuu sidoo kale sheegay in dadka Soomaaliyeed ee kusoo laabanayo dalkooda kaliya inay kasoo dageynin Muqdisho,sidoo kalana ay gaarayaan deegaanada kala duwan ee dalka.
Wuu ka codsaday dowlada iyo qaramada inay iska kaashadaan sidii dadkaasi aysan u dareemi laheen wax culeys ah oo kaga yimaado shaqo la’aan soo wajahda.